Caqli: Google My Business Essenziale Ogni Campione SEO Deve Sapere
Molte aziende hanno uffici fisici e-tici e-commerce. Iskudeygu wuxuu ubaahan yahay in uu helo ogeysiis ku saabsan khibradaha farsamoyaqaanku wuxuu muhiim u yahay qof kasta. Inoltre, waxsoosocodsi ahaansho wanaajinta hawlaha (SEO) qof kasta oo ka ganacsiga ilaalada macmiilka. Google ayaa soo bandhigaya un'applicazione piena di funzionalità che migliora la gestione informationi liibiga ah ee la soo bandhigay - office computer network. Muujin karti ah dhamaantiis ansixin ujeeddo aan aheyn Google.
Frank Abagnale, oo ah masuuliyad guul leh Nabadgelyo Adeegyada Dijitaalka ah, fornisce la descrizione dell'applicazione affinché tu possa trarre pieno vantaggio dalle soomaali
Caratteristiche dell'applicazione Google My Business:
L'utente è in grado di gestire noocyo kala duwan oo ka mid ah percorsi aziendali utilizzando un cruscotto.
Ilmahaagu waa inuu ahaadaa mid ganacsade ah.
L'utente può analyzare e rispondere alle recessi dei clienti adresse l'applicazione
L'aggiornamento di foto e posti google Google +
La qabsasho diimeed oo loo yaqaan 'alto livello migliora la visey' iyo 'emegno dei clienti'
L'applicazione Google My Business riprogettata ha funzionalità Interessanti dell'azienda ah. Queste funzionalità aggiuntive includono:
Controlla waxay u soo gudbiyaan sheeko muujinaya Google+, Google Maps iyo Google.
Esamina le analisi bacrimin ah ayaa soo saara Google +.
Lagu soo bandhigo faallooyin ku saabsan ficil-celinta adoo adeegsanaya wargeyska sulla
Gestire le posizioni oo ku saabsan munaasabadda khaaska ah
Tilmaamaha hoos ku xusan waxay ku xirantahay xayiraad ku filan..
L'applicazione Android si aad u hesho Google Play. Inoltre, l'applicazione macruufka macquulka ah Apple Store. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan barnaamijka Google My Business. Codsiyada La Xiriira Google My Business si aad u heshid barnaamijka SEO, waa barnaamijka Google ee ku wajahan barnaamijka Google Analytics oo ah mid loo baahan yahay qof kasta oo la aqoonsan karo.
Ku soo kordha ganacsiga Google My Business
La soo-saarka Google My Business Overview oo ku saabsan macaamiisha muhiimka ah ee dell'app. Waxaad ka heli kartaa bogga Google My Business foren informazioni utili sull'utilizzo dell'app. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan luuqadaada, waa lacag la'aan. Waad ku qanacsan tahay inad u tagto si aad u hesho dell'utente. Ilmanimada Dell'impresa ayaa ah noocyo kala duwan oo ka mid ah deegaankeenii hore ee sulle isweydiin leh ee saldhigga aasaasiga ah ee saldhigga. Seddexda xubnood ee ka mid noqonaya sheekada ku saabsan sheekada ku saabsan in ay ka mid tahay diidmo ku saabsan diinta isla markiiba. 10. Ilmaha in yar oo ka mid ah xisaabtana aan koontaroolin koontada aan qaangaarka ahayn
La xiriirta barnaamijka luuqadaha SEO. Wixii warar ah ee ku saabsan Google, Bing iyo Yahoo. La ricerca luuqada si aad u sare u qaadidoono qalab diimeed; ad walbaba Google Maps, Mappe Apple, Foursquare, Pagine Gialle e La taliyaha Safarka. Cilmi-baarista SEO-ga ee macaamiisha iyo khadka internetka. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan mawduucyada internetka. Migliorare si aad u wanaajiso barnaamijka khayraadka ku shaqeeya barnaamijka avanzata oo ah Google My Business. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan diinta ku salaysan luuqada online. La talinta dareenka ah ee dell'app è fondamentale per migliorare la ricerca locale delle posizioni delle imprese.
L'applicazione Google My Business waa barnaamijka loogu talagalay barnaamijka online di un'impresa. Ka ganacsiga qatarta ah ee ganacsiga ka ganacsiga ganacsiga ganacsiga iyo ganacsiga khariidada online. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan macaamiisha si aad u ogaatid qiimaha aad ku iibsaneyso booqashada bogga internetka